Waajira raayyaa ittisa Ameerikaa, Peentaagoon (Suuraa faayilii)
Ministeerii Ittisa biyyaa Yunaayitid Isteets /peentaagoon waraanaa biyyatii keessatti hookkoraa saalaa raawwatamu ilaalchisee karoora harra akka ojii irra oolchu beeksiseera.
Qaamnii bilisaa ta’ee qorannoo taasisuudhaan yaada keeneen ministeerii ittisaa ittigafaatamummaa, ittisa, aadaad fi warren midhaan hookorri saalaa irratti raawwatame gargaaruu irratii tarkaanfii inii fudhachuu qabau ibseera.
Ministirri Ittisa biyyaa Yunaayitid Isteets Liloyiid Austiin ojii irra ollchama yaadaa dhihaatee raggaasisuu isaanii yemmuu ibsan akka jedhanitti, hoggantoonii peentaagoon yaada dhihaatee ojii irraa olchuudhaaf akka soccho’an gaafataniiru.
Liilooyid akka dabalanii jedhaniitii Hokkoraa saalaa waraana biyyatii keessatti taasifamu dhabamsiisuudhaaf hoggansii waraanaa akka hoggansaa barbaachisaa ta’e kennan ajajaniiru.
Itti anntuun Ministira Ittisaa biyyaa yuunayitid isteets Katheleen Hichs gama isaaniitiin akka jedhanitti , tarkaanifiiwan fudhatamuu qaban tokko tokko ojii irra ooluu jalqabeera. Karoora bahe guututti ojii irra oolchuun amma baraa 2027 akka turu himaniiru. Karoorrii bahe kun maal maal akka ta’ee baldhinaan wantii ibsamee hin jiru.